အဆိုတော်အောင်လရဲ့ ပြောစကားတွေကြောင့် သူမတို့သားအမိ ဒုက္ခရောက်ရတော့မယ့် အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ လပြည့်ကဗျာ – CHAR TAKE
အဆိုတော်အောင်လရဲ့ ပြောစကားတွေကြောင့် သူမတို့သားအမိ ဒုက္ခရောက်ရတော့မယ့် အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ လပြည့်ကဗျာ
ပရိသတ်ကြီးရေ လတ်တလောမှာတော့ ရေမွန်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆိုတော်အောင်လက ဖွင့်ချခဲ့မှုအပေါ် ညီမဖြစ်သူ လပြည့်ကဗျာက ပြန်လည်ချေပပြောဆိုခဲ့တာပါ ။
”အောင်လရေနင်က ပရိတ်သတ်နဲ့ ရန်တိုက်ရုံတင်မဟုတ် ကျန်ခဲ့တဲ့ သားအ မိ ၃ယောက်ကိုပါ အဖမ်းခံရအောင် လုပ်တာနော်ဒါလား တွတ်ပီကို ချစ်တာ ?ဒါလား တွတ်ပီ သူငယ်ချင်း ? စောက်ရေးမပါတဲ့ အရက်သမားကိုတွတ်ကို သဂြိုလ်တဲ့အချိန်တော့အ လောင်း သဂြိုလ်ဖို့ အတွက် လိုက်သွားရပါတယ်။
သူတင်ထားသလို ဘယ်သူနဲ့မှလဲဘာမှပတ်သက်မှုမရှိဘူးတလပြည့်တိုင်း နောက်ဘဝလေးမှာအဆင်ပြေပြေ နေလို့ရအောင်လှူတန်းပေးတယ် ငါတို့လဲတင်နေတာပဲအခုချိန်ကျမှ ဘာလို့များအညှိုးတကြီးနဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်နေတာလဲ ??? ??
နာရေးကူငွေ သိန်း 1000 ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံထဲက နင်တို့မရလို့လား သိန်း 1000 ဆိုတာလဲ နာရေးကူငွေနော် ငါ့အကိုနဲ့ ကျန်ရစ်သူ အတွက်ကျေကျေနပ်နပ် ထည့်ခဲ့ကြတာါ တို့အေးဆေးနဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်မုှအတွက် ဈေးရောင်းစားတယ် အမေက Notes သင်တယ်ဒါကိုး နိုင်ငံရေး မပါပါအောင်လုပ်တယ်သားကို thet တဲ့အမေ ဆိုပီးဖွတယ်
အမေ့ကြောင့် thay တယ်ဆိုပီးပြောတယ် $ တလွဲတွေ တင်ပီး ဆုံးတာ တနှစ်တောင်ပြည့်ခါနီးမှ ထကြောင်နေတာလဲ ???တွတ်ပီ တယောက် လုံး မရှိတော့တာမလုံလောက်လို့လား ? ဒီမိသားစုတွေ ကလေးပါ မကျန်ဒုက္ခရောက်ပီး မသာပေါ်တော့မှနင်တို့တွေ ကျေနပ်ကြမှာလား ???အေး ငါတို့တခုခု ဖြစ်ရင်တော့နင်တရားခံနော် ” ဆိုတဲ့စာနဲ့ ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေအမြင်ကိုလည်း ဝေဖန်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ crd
Unicode … အဆိုေတာ္ေအာင္လရဲ႕ ေျပာစကားေတြေၾကာင့္ သူမတို႕ သားအမိ ဒုကၡေရာက္ရေတာ့မယ့္ အေၾကာင္းေျပာျပလာတ့ဲ လျပည့္ကဗ်ာ
ပရိသတ္ႀကီးေရ လတ္တေလာမွာေတာ့ ေရမြန္ေသဆုံးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆိုေတာ္ေအာင္လက ဖြင့္ခ်ခဲ့မႈအေပၚ ညီမျဖစ္သူ လျပည့္ကဗ်ာက ျပန္လည္ေခ်ပေျပာဆိုခဲ့တာပါ ။
”ေအာင္လေရနင္က ပရိတ္သတ္နဲ႔ ရန္တိုက္႐ုံတင္မဟုတ္ က်န္ခ့ဲတ့ဲ သားအ မိ ၃ေယာက္ကိုပါ အဖမ္းခံရေအာင္ လုပ္တာေနာ္ဒါလား တြတ္ပီကို ခ်စ္တာ ?ဒါလား တြတ္ပီ သူငယ္ခ်င္း ? ေစာက္ေရးမပါတ့ဲ အရက္သမားကိုတြတ္ကို သၿဂိဳလ္တ့ဲအခ်ိန္ေတာ့အ ေလာင္း​ သၿဂိဳလ္ဖို႔ အတြက္ လိုက္သြားရပါတယ္။
သူတင္ထားသလို ဘယ္သူနဲ႔မွလဲဘာမွပတ္သက္မႈမရွိဘူးတလျပည့္တိုင္း ေနာက္ဘ၀ေလးမွာအဆင္ေျပေၿပ ေနလို႔ရေအာင္လႉတန္းေပးတယ္ ငါတို႔လဲတင္ေနတာပဲအခုခ်ိန္က်မွ ဘာလို႔မ်ားအညႇိုးတႀကီးနဲ႔လိုက္တိုက္ခိုက္ေနတာလဲ ??? ??
နာေရးကူေငြ သိန္း 1000 ဆိုတ့ဲ ပိုက္ဆံထဲက နင္တို႔မရလို႔လား သိန္း 1000 ဆိုတာလဲ နာေရးကူေငြေနာ္ ငါ့အကိုနဲ႔ က်န္ရစ္သူ အတြက္ေက်ေက်နပ္နပ္ ထည့္ခ့ဲၾကတာါ တို႔ေအးေဆးနဲ႔ ရွင္သန္ရပ္တည္မုွအတြက္ ေစ်းေရာင္းစားတယ္ အေမက Notes သင္တယ္ဒါကိုး နိုင္ငံေရး မပါပါေအာင္လုပ္တယ္သားကို thet တ့ဲအေမ ဆိုပီးဖြတယ္
အေမ့ေၾကာင့္ thay တယ္ဆိုပီးေျပာတယ္ $ တလြဲေတြ တင္ပီး ဆုံးတာ တႏွစ္ေတာင္ျပည့္ခါနီးမွ ထေၾကာင္ေနတာလဲ ???တြတ္ပီ တေယာက္ လုံး မရွိေတာ့တာမလုံေလာက္လို႔လား ? ဒီမိသားစုေတြ ကေလးပါ မက်န္ဒုကၡေရာက္ပီး မသာေပၚေတာ့မွနင္တို႔ေတြ ေက်နပ္ၾကမွာလား ???ေအး ငါတို႔တခုခု ျဖစ္ရင္ေတာ့နင္တရားခံေနာ္ ” ဆိုတဲ့စာနဲ႔ ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။ ပရိသတ္ေတြအျမင္ကိုလည္း ေဝဖန္ေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။ crd